Rano Adrafinil volo (63547-13-7) - Manufacturers - Phcoker Chemical
Rano Adrafinil roahina (63547-13-7)
Adrafinil dia vinaingitra mampiavaka izay mampiroborobo ny fahamendrehana sy ny fahamendrehana, ary koa ny fametrahana karazam-barotra maro mahatalanjona ...... ..
fahafahana: 1088kg / volana
SKU: 63547-13-7 Sokajy: Drug Smart
Vary vita tamin'ny vovoka poera Adrafinil (63547-13-7)
Rohila vita amin'ny roapolo vita amin'ny poofa Adrafinil (63547-13-7)
Roahina roapolo Adrafinil poofomam-paty dia fitaovam-pandanjalanjana marefo ao amin'ny rafi-pitantanana ampiasaina mba hanamaivanana ny hatsiaka sy ny tsy firaharahiana amin'ny marary zokiolona. Mampiasaina koa ny lisitry ny olona maniry ny hisorohana ny reraka, toy ny mpiasa amin'ny alina na ny olon-kafa mila mitandrina sy mitandrina mandritra ny fotoana maharitra. Roahina roapolo vita amin'ny poofa Adrafinil dia tsy manana fankatoavana avy amin'ny FDA amin'izao fotoana izao ary tsy voafehy ao Etazonia.
Rojo roapolo Adrafinil vovobony fanatsofohana vovoka dia mampitombo ny fahamalinana sy ny fahatsiarovan-tena. Roahina roapolo vita amin'ny vovobony Adrafinil dia mampihetsi-po, saingy tsy miteraka aretim-po izany. Mifanohitra amin'ny torimaso izy io. Mety hanatsara ny fahatsiarovan-tena ny vovo-dronono vita amin'ny hoditra Adrafinil, saingy ilaina ny fikarohana mba hanamafisana io vokatra io. Roahina roapolo vita amin'ny poofa vita amin'ny poofa Adrafinil no miasa amin'ny modafinil. Ny fikarohana hafa dia ilaina mba hamaritana ny môtera marina amin'ny modafinil, saingy ny porofo mialoha dia maneho fa ny fampiharana siantifika dia mety hanana anjara asa manan-danja.
Roahina roapolo vita amin'ny poofoneran'ny Adrafinil Specifications
Product Name Roahina roapolo vita amin'ny poofoneran'ny Adrafinil
Anarana simika 2-benzhydrylsulfinyl-N-hydroxyacetamide
Brand Name Olmifon
Drug Class a-Adrenergic
molekiolan'ny Formula C15H15NO3S
molekiolan'ny Wvalo 289.349 g / mol
Monoisotopic Mass 289.35
mitsonika Point 159-160 ° C
Ny antsasaky ny biolojia Tokony ho ora 15
Storage Temperature -20 ° C Frizidera
Application Ampiasaina hampiroborobo ny fahamailoana, ny fiheverana, ny fahatsapana, ny fihetseham-po ary ny hafa, indrindra fa ireo zokiolona.
Raw Adrafinil powder (63547-13-7) Description
Adrafinil dia singa tsy misy dikany. Izany dia fitaovana ho an'ny modafinil, Rehefa metabolised ny poezia Adrafinil, dia miova ho modafinil, fankaherezana izay mampitombo ny fahatsapana fa tsy miteraka tebiteby na vokatry ny zavatra hafa izay mifandray matetika amin'ny fitsaboana.
Tsy misy lalàna mifehy ao Etazonia, Kanada, ary Angletera ary azo vidiana ara-dalàna any amin'ireny firenena ireny. Manerana ny etikety no ampiasaina matetika mba hiadiana amin'ny reraka sy ny fampitomboana ny angovo, ary maro ireo mpampiasa no mihevitra azy io ho fampihetseham-pandrenesana mahomby.
Adrafinil dia misy fiantraikany ratsy eo amin'ny fiantraikany eo amin'ny fiaraha-monina ary toa manana hery kely hiankinan'ny fiankinana, ny fandeferana, na ny fiankinan-doha.
Adrafinil powder (63547-13-7) Mekanisma amin'ny asa
Tsy tena takatra ny fomba fiasa adrafinil.
Adrafinil dia miasa eo amin'ny rafitra nerlandy tompon'andraikitra amin'ny famokarana adrenalinina. Izy io dia mamerina ny vokatry ny famotsorana adrenaline amin'ny fiantraikany amin'ireo neurotransmitters voakasik'izany. Ny tampoka voajanahary tampoka dia mampitombo ny heriny ary manatsara ny fahamalinana.
Adrafinil dia manova indraindray ny dopamine, mety hampitombo ny famokarana ary hisorohana ny fisarahana ny dopamine ny Adrafinil. Ny fisian'io neurotransmitter manan-danja io dia manatsara ny fihetseham-po, mampihena ny adin-tsaina, ary amin'ny ankapobeny, dia mandray anjara lehibe amin'ny valin'ny fihetseham-pony.
Adrafinil dia heverina ihany koa ny hamporisihana ny famotsorana serotonine. Io trano io dia afaka manampy bebe kokoa ny fihetseham-ponao ary mety hampihena ny ahiahy.
Ny toetra mampiavaka ny adrafinil dia mety vokatry ny roa, ny fanantenana tsara amin'ny glutamate receptors ary ny fisorohana ny famoahana glutamate. Ny vokatra dia fampitomboana ny atidoha sy ny fifandraisana vaovao.
Ny fifandraisana tsara kokoa dia mamolavola tsaratsara kokoa amin'ny asa saina ary, indrindra, dia manatsara ny fifantohana sy ny fahatsiarovana.
soa of Adrafinil powder (63547-13-7)
Adrafinil dia mampiroborobo ny fahamalinana sy ny fahatsiarovan-tena.
Mety hampitombo ny sainy ny adrafinil.
Adrafinil dia afaka manatsara toe-tsaina.
Adrafinil dia mety manemotra ny fahatsapan'ny torimaso ary mampitombo hery.
Mety hampitombo ny fahatsiarovana ny Adrafinil.
Adrafinil dia mety hihena ny fiankinan-doha.
soso-kevitra Adrafinil powder (63547-13-7) Dosage
Ho an'ny mpangataka, ny dosage fahazoan-dàlana dia 25 - 50 mg mba hitsapana ny tsy fahasalamana na ny fiantraikany ratsy.
Rehefa avy nanamarina fa tsy misy fiantraikany ratsy, dia tsara ny manakana ny dosage adrafinil ho an'ny 300 mg- 1200mg.
Ny soso-kevitra momba ny dosage dia miovaova, fa ny ampahany 300-1200 mg isan'andro amin'ny adrafinil ho an'ny tanjona ara-pitsaboana dia naseho ho azo antoka sy mahomby.
Side effects of Adrafinil powder (63547-13-7)
Ny voka-dratsin'ny adrafinil volo dia ny aretim-po, ny fitabatabana, ny hafanam-po, ny herisetra, ny herisetra ary ny tsy fahitan-tory. Ny fampiasana adrafinil dia mety koa ny fiantraikan'ny fihenan'ny alahelonao,
Ny voka-dratsiny lehibe indrindra dia mifandray amin'ny asan'ny fo. Misy koa ny mety hisian'ny fiakaran'ny tosidra sy ny aretim-po, indrindra amin'ny dose ambony.
Miangavy mpitsabo ara-pitsaboana alohan'ny handraisana adrafinil raha manana olana momba ny aty na aretim-po ianao.
Robertson, P., ary Hellriegel, ET (2003). Sarin'ny Clinical Pharmacokinetic momba ny Modafinil. Clinical Pharmacokinetics.
Dongsoo Kim. (2012). Fampiasana mahazatra sy risika ao Modafinil, fanafody tantaram-baovao. Fahasalamana momba ny tontolo iainana sy toxikolojia.
Siwak, CK, Callahan, H., ary Milgram, NW (2000). Adrafinil: Ny fiantraikany amin'ny fitondran-tena sy ny fahatsapana amin'ny tsy fahampian-tsakafo.
1 famerenana for Rano Adrafinil roahina (63547-13-7)
phcoker - Enga anie 15, 2019
Manana vovo-dronono Adrafinil mba hitsapana, ny vokatra azo avy amin'ny test dia tena avo lenta sy fahamendrehana!
Ny poezia Fasoracetam dia racetam nootropic vaovao ary mampanantena fa ny fampivoarana ny ADHD. ...... ..
fahafahana: 1570kg / volana
Rohamena CRL-40,941 (90212-80-9)
Ny voam-barotra CRL-40,941 (fantatra amin'ny hoe fladrafinil sy fluorafinil) dia eugeroic akaiky mifandray amin'ny adrafinil sy modafinil. Izy io ilay bis (p-fluoro) ...... ..
fahafahana: 1260kg / volana